China Wood Screws Kugadzira uye Fekitori | Zhanyu
· Yakajairwa: DIN / ASTM
· Saizi: m6-m12
· Kugonesa Kugona: 200 Matani pamwedzi
· Mharidzo Nguva: 3-5days
Nzira yekubhadhara: T / T, L / C.
Wood screw, inozivikanwawo sehuni sikuru, yakafanana nemuchina sikuruu, asi iyo tambo tambo ndeye yakakosha huni screw tambo, iyo inogona kukamurwa yakananga kuita huni chinhu (kana chikamu) kubatanidza simbi (kana isiri-simbi) chikamu iine buri kuburikidza nehuni chinhu. Rudzi urwu rwekubatanidza runogonawo kutsauka.
Kubatsira kwehuni sikuru ndeyekuti ine simba rakasimba rekusimbisa pane kurovera, uye inogona kubviswa uye kutsiviwa, iyo isingakanganise huni hwepamusoro uye iri nyore kushandisa.
Izvo zvakajairika mhando dzehuni screws isimbi nendarira. Zvinoenderana nemusoro wembambo, iwo anogona kuve akapatsanurwa kuita akakomberedza mhando yerudzi, yakati sandara musoro mhando uye oval musoro mhando. Musoro wechipikiri unogona kukamurwa kuita slotted screw uye muchinjikwa slotted screw. Kazhinji, kutenderera musoro sikuruu kunoitwa nesimbi nyoro uye bhuruu. Iyo yakapfava musoro sikuruu yakabwinyiswa. Oval musoro sikuruu inowanzo kuvezwa necadmium uye chromium. Iyo inowanzo shandiswa kuisa yakasununguka shizha, hoko uye zvimwe Hardware accessories. Iwo maratidziro anotarwa nehupamhi uye kureba kwetanda uye mhando yemusoro wetsono. Bhokisi ndiro chikamu chekutenga.
Kune maviri marudzi e screwdrivers ekuisa screws yehuni, imwe yakatwasuka uye imwe iri muchinjikwa, inoenderana neiyo groove chimiro chehuni screw musoro. Uye zvakare, pane chaicho mutyairi akaisirwa pauta chibooreso, chakakodzera kurodha uye kuburitsa yakakura huni screws. Zviri nyore uye basa-okuponesa.
Pashure: Hex musoro wega kuzvicheka screws
Zvadaro: Yekutakura bhaudhi
China handan hebei wedzera Concrete chinotsira Drop -...